Sida loo shaashadda Ciidamada ee iMovie on Mac / iPhone / iPad
Iyadoo iMovie, waxaad si fudud u edit karaa videos sida per shuruudaha aad. Ayaa dhisay maktabada waxay qabanqaabisaa aad videos si dhan filimada qabsaday aad saxar ama abuuray waa uun click ka tagayo. Interface ayaa kacaanyahan ah iMovie ka dhigaysa mid u fudud in la dhirtuba maktabadda filim aad iyo abuuro kuwo cusub. Waxaa intaa dheer, waxaa la dhisay la wadaago iyo sidoo kale iyagoo soo daabacay aad videos in caanka ah video madal YouTube u iPhone, Apple TV iyo iPod. Haddii aad ka fekereyso inaad qabtay shaashadda, version cusub ee iMovie 11 ogolaan doonaa in aad Xayiraadda jir by xaq gujinaya clip ah. Haddii aadan ka war hayaan qaabka ay u qabsadaan shaashada la iMovie, halkan waa tallaabo hagitaan talaabo talaabo aad u.
Part1: qabsaday shaashada la iMovie on Mac
Qabashada Screen in iMovie on iPhone / iPad: Part2
Part3: Sida loo qabsaday Screen on Windows isticmaalaya Free Software
1. Dooro clip aad rabto in lagu soo qabto sida jir ah weli.
2. Slide jiirka in doorashada aad rabto in aad jir hakinta iyo Right click.
3. Dooro ikhtiyaarka "Add jir debcinta".
Waa mid aad u fudud in la abuuro shaashadda in iMovie by kaliya xaq gujinaya clip ee la doortay iyo doorashada "jir Xayiraadda". Si kastaba ha ahaatee, file image ah in aad qabtay baaba'aa hore. Haddii aad xaq u guji jir xanibay in iMovie ah, fursad u "Shaaca in Finder" baaba'aa in menu pop ah. Waayo, kan aad u baahan tahay in la sameeyo talaabooyinka soo socda.
4. caawi- maadda aad ka badan clip filimka, jir debcinta la abuuray. Midig u guji iyo dooranayaan "Shaaca in Finder".
5. Xaq-Guji file movie ee Finder ah iyo dooran furan QuickTime Player.
6. In QuickTime heli Player barta in filimka ka aad rabto in aad la abuuro image ah.
7. Open Kulanka Xiisaha iyo dooran File, New Command-N; Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh abuuri doonaa dukumenti cusub PNG size la mid ah sida file filimka.
Haddii aad tahay isticmaalaya iMovie aad iPhone ama iPad iyo rabto in shaashadda ka mid ah qayb aad jeceshahay, halkan waa tilmaan ah tallaabo-tallaabo aad u.
1. Ku dar video la doonayo in waqtiga.
2. Play video ah oo ay doortaan hal dhibic ee aad doonayso in lagu soo qabto shaashada ka. Press hakinta.
3. Press iyo hay furayaasha xoog iyo guriga wada labaad ah. Flash A cad u muuqan doona shaashada kaaga tilmaamaysa, aad leedahay guul qabtay shaashadda ah. Waxaad qabsan karaa shaashadda in sawirka ama muuqaalka hab.
Waa mid ka mid fudud oo wax ku ool ah siyaabaha in ay qabsadaan shaashada ka, iyadoo aan loo eegayn nooca codsiga aad ordaya aad iPhone ama iPad.
Haddii aad rabto in lagu soo qabto software scree ama video ka duubo, eegi jirin dheeraad ah sababtoo ah software free TinyTake welwelka aad iska qori kartaa. Waxaad qabsan kartaa sawirada iyo videos ee shaashadda kombuyuutarka aad iyo iyaga oo aad saaxiibo ku daqiiqo wadaagaan. Haddii aadan aqoon sida loo isticmaalo, halkan waa tilmaan fudud si ay kuu caawiyaan.
TinyTake Screen Ciidamada
1 Waxaad u baahan tahay inaad iska diiwaan xisaab on TinyTake Screen Ciidamada.
2. Ka dib markii ay si guul ah in aad gashid, guji nidaamka saxaarad icon ka dib oo aad loo soo bandhigi doonaa hababka kala duwan ee ay qabtaan.
3 Haddii aad rabto in lagu soo qabto meelo gaar ah on your computer, riix on "Ciidamada gobolka", dooro gobolka aad rabto in lagu soo qabto. TinyTake muujinaysa cabbir width oo sarajooggeeduna wuxuu ahaa meeshaa aad muujisid.
4. Wax yar ka dib ood shaashada ka, suuqa kala Falanqeynta ah arbushin doonaa. Waxaad dooran kartaa in ay dib-u-sameyn, waxaa annotate, ama uun u geliyaan.
TinyTake waa lacag la'aan ah si ay u isticmaalaan software daaqadaha si ay u qabsadaan shaashada iyo sidoo kale hawlaha kale oo badan oo aad isticmaali karto iyadoo wax dhibaato ah.
Sida loo sameeyo iMovie Screen Green on Mac / iPhone / iPad
Top 10 links torrent soo bixi iMovie
5 talooyin iMovie 11 aad u baahan tahay in la ogaado
iMovie: iMovie Dhibaatooyinka Talooyin
> Resource > iMovie > Sida loo shaashadda Ciidamada ee iMovie on Mac / iPhone / iPad